Marxaladda kala guurka ah iyo Madaxda mustaqbalka Q:1aad – Bashiir M. Xersi
Marxaladda kala guurka ah iyo Madaxda mustaqbalka Q:1aad
Waxaa maalmahan loo wada xusul duubayaa ama xawli loogu jiraa, sidii loo soo xuli lahaa gudiyada marxaladda kala guurka ah, si ay u qabtaan hawlo badan oo aad u adag, labo ayaase ugu muhimsan gudiyadan, kalana ah: Ansixinta Dastuurka qabyo qoraalka ah iyo soo Xulidda Xildhibaanada. Intaanba hawshii la gudagalin, ayaa waxaa dhashay tuhun iyo farfiiq, eedda ayaa dhalatay, ka dib markii la furay Sayladda Suuqa lagu kala iibsanayo Odayaasha loo igman doono hawlahan.
-Dawlado ku meel gaar ah: Labaatanka sano ee burburka lagu jiro, dalka waxaa soo maray ku dhawaad shan dawlado ku meel gaar, dhaqan ahaan iyo maskax ahaanba, ku meel gaarka, waxay ahayd inay ka dambayso marlaxad nagi iyo deganaansho, haddii markii hore loo baahnaa in heerka la joogo laga gudbo, loona baxshay ku meel gaar, si loo caddeeyo inaysan ahayn daa’in iyo wax waligeed sii soconaya, balse, ayaandarrada Soomaalida ku habsatay ayey ka mid tehee, waaba la daa’imiyey.
-Ergay cusub: Lixdii sanee u dambaysay, waxaa la soo magacaabay sadax ergay, oo uu ugu dambeyo mudane Mahiga, haddaad gadaal sii qooraansatana qoorta ayaa ku daalaysa kaliya, waxaaba laga yaabaa inaad tirin weyso, dabcan, ujeed la’aan ma ahan, dhammaan qodobadan aan soo xusay, mid walba waxaa laga leeyahay dan gaar ah, aan isku dayno inaan fahamno. Kan hore, ee “ku meel gaarka” waa waligaa garab rarato iyo geeddi ha ka gudbin. Kan labaad, ee “Shirarka dib u heshiineed” waa waligaa gabraarta shisheeyaha ha ka guurin. Kan ugu dambeeya, ee “Ergay cusub, waa waligaa basaas ha noo kaa dhex joogo.
Arartan gaaban ka dib, aan u daadego dulucda qormada, oo u badnaa doonta tilmaamo iyo talooyin. Sidaa awgeed, waxaan ka sii cudurdaaranayaa qofkii aan igu aragti ahayn, inuusan ii ciilloon, maya, inuusan iga caroon. Ujeedku ma ahan qof iyo qabiil, kali iyo koox. Waxaanse farta ku fiiqi doonaa meelo badan, waana midda aan ka sii afeefanayo, illeen waa tii la yiriye: “Hadalkaaga hortiisa afeef ayaa la dhigtaa, Gurigaaga hortiisana ood”.
Ugu horrayn, tirada guddigan iyadoo lagu wareersan yahay, ayaa waxaa noo koobay Wasiirka Dastuurka iyo Dib u Heshiisiinta C/raxmaan Xoosh sheegayna in ay horay u ahaayeen soddon qof , haddana ay yihiin sagaal qof  oo uu ku tilmaamay “khubaro” -Sir iyo caad ogayaal- waa siduu hadalka u dhigee, sagaalka sargaal wuxuu ka xusay mudanayaashan -oo dabcan uu wada ammaanay-: Caasha Kiin Faarax Ducaale, Prof jawaari, Dr Cali Siciid Faqi, Shukri Diini iyo Xannaan.
Balaan jeexjeexo qodobka Jinisyadda, mid waa inaan isla wada qirnaa, inaan nahay dal xitaa aan SABOOL lagu tilmaami karin, intaa waxaa noo sii dheer, inaan ku jirno dawladaha dhan walba ku fashilmay, haba ugu darnaadaan dhanka ammaanka, maamulka iyo garsoorka, waaba haddii raadkood la hayee.
Sidaa waxaan u leeyahay, qofka marka uu mudnaado Jinsiyad/Dhalasho, wuxuu yeelanayaa xuquuq uusan markii hore lahayn, maya, wuxuu la mid noqonayaa Muuwaadinka Soomaaliyeed, ee aan la Soomaaliyeyna. Haddaba, miyeysan habboonayn inaan arrinta si fudud loo gudagalin? Waa midda koowaade, dhaqaalo uma haynno, in qof walba oo shan sano na dhexjooga aan dhalasho dhab ku siino. Anagii ayaa naf la caari ah, ee sideen dad kale ku xammili karnaa? Aniga iima dhadhamin.
Midda naxdinta leh ayaa ah, in qodobkan ay qorteen dawladaha ay ciidanka ka joogaan wadanka, si gaara Xabashida, oo danteedu tahay inay ku yeelato Soomaalida dhexdeeda, dad badan oo la Soomaaliyeeyey, micnaha dad asal ahaan ka soo jeedo wadankeeda, balse, xaq buuxa ku leh Soomaaliya. Haddaba, maxaa ka horjoogsanaya in ay berri madax noqdo?.
Waxaan la yabaa dad badan oo muran ka kenay qofka Soomaaliga ah ee xil qabanaya inaysan shardi u ahayn inuu Muslin ahaado! Waana meesha kaliya ee laga hadlay ilaa iminka, waxaa ku soo xiga midda sadbursiga. Waaba yaabe, dadkan maba u muuqdo wadankan xaraashka ah, ee la leeyahay qof walba wuxuu noqon karaa Muwaadin Soomaaliyeed, sida iyo saabku muhim ma ahan, waaba laguu sadrayee ku dul susub, sina ha uga seerayn.
Previous Previous post: Marxaladda kala guurka ah iyo Madaxda mustaqbalka Q:2AAD
Next Next post: Yaa Qaswade ah?!